जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी ! ॐ लेखी (सेयर हेर्नुहोस्) - Aajako Nepali Khabar
तस्वीर हो गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ आँपचौरमा रहेको कोटेश्वर महादेव मन्दिरको ।अहिले पनि सो मन्दिरमा गुल्मी,अर्घाखाँची बाग्लुङ,पाल्पा, प्युठान, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायत नेपालका धेरै जिल्ला हरुबाट श्रद्धालु भक्तजनहरु पुजापाठको लागी त्यहाँपुग्ने गर्दछनत्यस मन्दिरमा जे बर मागे पनि पुग्छ भन्ने जनबिश्वास रहिआएको छ । तपाई पनि सक्नुहुन्छ भने एकपटक सो मन्दिरमा दर्शनको लागी आउनु होला “‘
के तपाइलाई थाहा छ, एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्नाले नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रही आएको छ । कमेन्टमा ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिन भित्र आक’स्मिक धन लाभकाे योग हुनेछ ।
बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला । एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक पनि मानिन्छ ।
अत्यन्तै दु’र्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ । हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला फरक फरक सपना देख्ने गर्दछन्। धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ ! यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घटनाको अग्रीम जानकारी गराउने समेत मान्यता छ।